स्वयं खुसी रहनुपर्छ - जीवन शैली - प्रकाशितः श्रावण १९, २०७३ - नारी
जीवनमा आफूलाई के चाहिन्छ र त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा साना तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् जसका बारेमा दृष्टिकोण स्पष्ट छ भने मानिसका आधाभन्दा बढी समस्या आफै समाधान हुन्छन् । कतिपय मानिस आफ्नै जीवनका बारेमा स्पष्ट हुँदैनन् । उनीहरू आफ्ना प्राथमिकता पहिचान गर्न सक्दैनन् जीवनसित जोडिएका महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्दैनन् र स्वयंलाई परिस्थितिप्रति समर्पित गर्छन् । त्यसकारण तिनीहरूको करियर मात्र होइन निजी जीवन नै असफल हुने शंका कायम रहन्छ । आफ्नो रुचि पूरा गर्न नपाउँदा धेरैजसो मानिस ‘के गर्ने समय नै पाइँदैन ? भनेर सफाइ दिन्छन् । कोही क्रुजबाट संसार घुम्ने चाहना राख्छन् त कोही कलेजका दिनको छुटेको म्युजिक कोर्स र रुचिलाई पूरा गर्न चाहन्छन् । कोही अनाथ बालबालिकाका लागि स्कुल संचालन गर्न चाहन्छन् । रुचि फरक–फरक भए पनि गुनासो एउटै हुन्छ, ‘के गर्ने समय नै छैन ? अत: व्यक्ति आफ्ना ती सपनालाई पूरा गर्ने मिति रिटाएरमेन्टसम्म टार्छन् । तर प्रश्न उठ्छ आफ्नो खुसी प्राप्त गर्नका लागि रिटायरमेन्टसम्म प्रतीक्षा किन गर्ने ? भोलि कसले देखेको छ, के थाहा त्यस उमेरसम्म स्वास्थ्यले साथ नदिने पो हो कि ? अत: आजै प्रयास किन नगर्ने ?